Home News Kheyre oo Amray in La Weeraro Hoyga Dekadda ee Xildhibaan Cadow Cali...
Kheyre oo Amray in La Weeraro Hoyga Dekadda ee Xildhibaan Cadow Cali Gees Iyo Nisa oo Awood u sheegtay….
Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho aya shegaya in Goor sii horeysay ay Ciidamo ka tirsan NISA ay weerar ku qaadeyn Hoyga uu Magaalada Muqdisho ka dagan yahay Xildhibaan Cadow Cali Gees.
Ciidanka NISA ee Weerarka geeystay aya si an wanaagsaneen ula dhaqmay ilaalada Xildhibaanka iyado qaar ka mid ilaalada la jirdilay waxaana wararka ay shegayan in ilaalada qaar ka mid ah xibnahooda la jibiyay.
Weerarka lagu qaaday Hoyga Muqdisho uu ka dagan yahay Xildhibaanka oo ku yaala Dekada Muqdisho aya waxa hogaaminayay Taliyaha NISA ee Dekda Muqdisho Xamdi.
Amarka lagu weeraray Hoyga Xildhibaanka aya la shegay in uu laha Raii’sul Wasaare Xasan Cali Kheyre, waxana weerarkan uu kuso adaya xili Xildhiibaanka uu dalka Dibadiisa uu ku maqan yahay.
Weerarada lagu qaado Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada Labada aqal ee Golaha Shacabka aya lagu arkaya Muqdisho tan iyo markii ay talada Dalka la wareegeen Madaxweyne Farmaajo Iyo Raii’sul Wasaare Kheyre.